Isivinini Sesayithi Sithinta Kanjani Amanani Wokuguqulwa Kwe-ecommerce | Martech Zone
Sihlanganise uhlelo lwemiklomelo futhi sathuthukisa ukugeleza kokuzenzakalela okwenziwe ngezifiso okuningana nokwenzelwe ikhasimende le-e-commerce okwenyuse kakhulu imali engenayo.
Njengoba siqhubeka nokubuka abasebenzisi begeleza besuka kuma-imeyili ngokuguqulwa, sikhombe izingqinamba eziningana ngokusingathwa kwabo nengxenyekazi ebinomthelela omkhulu isivinini sesiza - kukhungathekisa amakhasimende abo angaba khona nokushayela amanani okushiya phezulu - ikakhulukazi ku mobile Amadivaysi.
Kungani Izindaba Zokushesha Kwekhasi
Kuhle ukusebenza ekuthengweni kokuthengwa, ukugcinwa, ukukhushulwa, kanye nokukhuphula inani lesilinganiso sokuzenzakalela kwe-e-commerce… kepha ngaphandle kokuthi isivinini sesiza sakho kanye nesipiliyoni sokuthenga kuvelele, awukhulisi buyela ekutshalweni kwezimali. Futhi, indawo yakho ye-e-commerce kufanele ihlolwe ngezindlela ezahlukahlukene zokuqinisekisa ukuthi isivinini sihlala sihle njalo:
Ingabe isayithi lakho le-e-commerce lihlala lishesha kuzo zonke iziphequluli?
Ingabe isayithi lakho le-e-commerce lihlala lishesha kuwo wonke amadivayisi eselula?
Ingabe isayithi lakho le-e-commerce lihlala lishesha kuwo wonke amadivayisi wedeskithophu?
Ngabe isayithi lakho le-e-commerce lishesha njalo kuzo zonke izifunda ozikhonzayo?
Ngabe isayithi lakho le-e-commerce lihlala lishesha uma unezivakashi eziningi kusayithi lakho?
Ukwehlukanisa ukusebenza kwejubane lesayithi lakho namazinga wokuguqulwa kwamanani kuzo zonke lezi zingxenye kubaluleke kakhulu futhi kungakhomba kwezinye izingqinamba ezikhazimulayo ezizothinta amazinga wokuguqulwa.
Bounce Amanani by Page Speed
Akunambuzo mayelana nomthelela jikelele wejubane lekhasi uma kukhulunywa ngamazinga okushiya:
Isivinini Sesayithi Le-E-Commerce
Abathengi abasenalo uvalo lapho bethenga kumakhalekhukhwini njengoba bekade benza. I-e-commerce yeselula ayinamali impela… uma isivakashi sakho sibuka esinye isikrini noma sisengxoxweni futhi sithenga kumakhalekhukhwini waso, ijubane lakho, nendlela yakho yokuguqula kufanele zisebenze ngokuzikhandla, kungenjalo zizogxuma ngokuphelele noma zilahle inqola eziyisebenzisayo ' ngiqalile. Bheka umehluko omkhulu wokuziphatha phakathi kwamadivayisi:
A isivakashi esingumahamba nendlwana kunamathuba angaphezu kokuphindwe kabili okubhampa kusuka kusayithi kune- isivakashi sedeskithophu.
Futhi lokho kuhumusha kanjani ekuziphatheni kwezitolo ze-e-commerce? Kukhulu:
Ukuthuthuka okungu-100-millisecond kwandisa ukuthengisa amazinga wokuguqulwa ngu-8.4%
Ukuthuthuka okungu-100-millisecond kwandisa ukuthengisa inani le-oda elijwayelekile (AOV) ngo-8.4%
Ukuthuthuka okungu-100-millisecond kwandisa uhlobo lokunethezeka ukubukwa kwekhasi ngu-8.4%
Eqinisweni, nazi izifundo zamacala amane ngomthelela wejubane lekhasi le-e-commerce leselula:
I-Amazon izolahlekelwa ama- $ 1.6 billion ngonyaka uma isivinini sesiza sinciphise umzuzwana owodwa.
Izitebele zibone ukwanda okungu-10% kwezinga lokuguqulwa lapho yehlisa isikhathi sokulayisha sasekhaya sekhasi eliphakathi ngomzuzwana owodwa.
I-Walmart ibone ukwanda okungu-2% kwamanani wokuguqulwa kukho konke ukuthuthuka kwesekhondi elingu-1 ezikhathini zokulayisha ikhasi.
I-AliExpress inciphise isikhathi sokulayisha ikhasi ngama-36% futhi yabona ukwanda kwe-10.5% kuma-oda kanye nokukhuphuka okungu-27% kokuguqulwa kwamakhasimende amasha.
U-Aldo uthole ukuthi abasebenzisi beselula abahlangabezane nezikhathi zokunikezela ngokushesha balethe imali engenayo engama-75% ngaphezu kwesilinganiso kanye nemali engenayo engama-327% ngaphezulu kunaleyo ethola izikhathi ezinikezela kancane.
Libaluleke Kangakanani Ijubane Lewebhu le-E-Commerce?
Izivakashi ezingama-88% zikhetha abathengisi abaku-inthanethi abaletha isipiliyoni sewebhusayithi esebenza kahle kakhulu.
Kulahleka u- $ 18 billion minyaka yonke ngenxa yezinqola zokuthenga ezishiyiwe.
Amakhasimende akhumbula izikhathi zokulayisha online njenge-35% ende ukwedlula njengoba zinjalo.
Sibhale kakhulu kwifayela le- izici ezinomthelela ezikhathini zokulayisha ikhasi futhi ngingakukhuthaza ukuthi usebenze ngejubane lekhasi ngaphambi uqala ukuletha abantu kusayithi lakho.
Lezi zibalo nemidwebo zinikezwe nge
Umhlahlandlela osanda kwethulwa weWebhusayithi Builder Expert Izibalo Zesikhathi Sokulayisha Iwebhusayithi - Kungani Izinto Zishesha Ngo-2020. Kusetshenziswa izibalo ezinemininingwane, izimpahla zedizayini ezibushelelezi, kanye nezifundo zamacala eziqeqeshiwe, lo mhlahlandlela ugcizelela isidingo esibalulekile sewebhusayithi elayisha ngokushesha ukugcina abathengi be-inthanethi benelisekile futhi bethembekile ezitolo ezisebenza kahle ze-e-commerce.
Funda Okwenza Ukushesha Kubaluleke ngo-2020
Tags: AldoAmazoninani le-oda elijwayelekilebounce rates ngomzuzwanaamazinga wokuguqulwaamazinga wokuguqulwa kwedeskithophuisivinini sokuhweba kweselulaukuhweba ngeselula ecommerceukubukwa kwekhasiamakhasi ngokuvakasha ngakunyeokuyisisekelo